မိန်းမကိစ္စနဲ့ ပြဿနာတက်တာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် မဟုတ်ပါဘူး
အသက်မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံခဲ့ရဖူးတဲ့ C​ristiano Ronaldo
6 Oct 2018 . 6:03 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း ကက်သရင်းမာယော်ဂါ Kathryn Mayorga ဆိုသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက သူမကို မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်ဆိုပြီး လူသိရှင်ကြား စွပ်စွဲခဲ့သလို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းကလည်း ကာရီမယ်မာရာ Karima El Mahroug လို့ အမည်ရတဲ့ မော်ရိုကိုနိုင်ငံသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကလည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူမကို အခကြေးငွေ ပေးပြီး ပျော်ပါးခဲ့ဖူးတယ်လို့ စွပ်စွဲခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။
Ruby Heartstealer လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ကာရီမယ်မာရာဟာ ဘဲလေးအကမယ်ဖြစ်သလို မိန်းမကောင်းတစ်ဦး မဟုတ်ဘဲ အခကြေးငွေပေးပြီး ပျော်ပါးလို့ရတဲ့ ပြည့်တန်ဆာတစ်ဦးပါ။ သူမက ၂၀၁၀ ခုနှစ်တုန်းက စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မီလန်မြို့မှာရှိတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ယူရို(၄၀၀၀)ပေးပြီး ပျော်ပါးခဲ့တယ်လို့ အီတလီရှေ့နေတွေကို တိုင်ကြားခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်က ကာရီမယ်မာရာရဲ့ အသက်ဟာ (၁၇)နှစ်သာရှိသေးပြီး အီတလီနိုင်ငံက ဥပဒေအရ ဒါဟာ ပြစ်မှုမြောက်ပါတယ်။ အီတလီနိုင်ငံမှာ နှစ်ဦးသဘောတူဆိုရင် အသက်(၁၄)နှစ်အရွယ်မှာ လိင်ဆက်ဆံခွင့်ရှိပေမယ့် အသက်(၁၇)နှစ်အောက် မိန်းကလေးတွေကို အခကြေးငွေပေး ပျော်ပါးရင် မုဒိမ်းမှုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားလို့ပါ။ ကာရီမယ်မာရာဟာ အဲဒီအချိန်ကတည်းက စွပ်စွဲမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုဘက်က အကြောင်းပြချက် အခိုင်အလုံနဲ့ ငြင်းဆန်ခဲ့လို့ စွဲချက်တင် မခံခဲ့ရဘူး။ စီရော်နယ်လ်ဒိုက ကာရီမယ်မာရာ စွပ်စွဲခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက သူဟာ မီလန်မှာ မရှိသလို အဲဒီမိန်းကလေးကိုလည်း တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူးလို့ ငြင်းဆန်ခဲ့လို့ သက်သာခဲ့တာပါ ။ ကာရီမယ်မာရာဟာ အရင်ကလည်း အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘာလူစကိုနီ Berlusconi ကို သူမ အသက်မပြည့်သေးတဲ့အချိန်မှာ ငွေပေးပြီး ပျော်ပါးခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အရင်ကတည်း မိန်းကလေးလေးတွေ ထည်လဲတွဲခဲ့သူဖြစ်ပြီး Celebrity တချို့နဲ့တောင် ပတ်သက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ မိသားစုနဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြတ်သန်းနေပေမယ့် အတိတ်က သူလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားတွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ခံစားနေရပြီလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ။
Photo: The Sun,Sport.
အသကျမပွညျ့သေးတဲ့ မိနျးကလေးတဈဦးကို ကြူးလှနျခဲ့တယျလို့ စှပျစှဲခံခဲ့ရဖူးတဲ့ Cristiano Ronaldo
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးအတှငျး ကကျသရငျးမာယျောဂါ Kathryn Mayorga ဆိုသူ အမြိုးသမီးတဈဦးက စီရျောနယျလျဒိုဟာ ၂၀၀၉ ခုနှဈတုနျးက သူမကို မုဒိမျးကငျြ့ပါတယျဆိုပွီး လူသိရှငျကွား စှပျစှဲခဲ့သလို ၂၀၁၃ ခုနှဈတုနျးကလညျး ကာရီမယျမာရာ Karima El Mahroug လို့ အမညျရတဲ့ မျောရိုကိုနိုငျငံသူ အမြိုးသမီးတဈဦးကလညျး စီရျောနယျလျဒိုဟာ သူမကို အခကွေးငှေ ပေးပွီး ပြျောပါးခဲ့ဖူးတယျလို့ စှပျစှဲခံခဲ့ရဖူးပါတယျ။
Ruby Heartstealer လို့ နာမညျကွီးတဲ့ ကာရီမယျမာရာဟာ ဘဲလေးအကမယျဖွဈသလို မိနျးမကောငျးတဈဦး မဟုတျဘဲ အခကွေးငှပေေးပွီး ပြျောပါးလို့ရတဲ့ ပွညျ့တနျဆာတဈဦးပါ။ သူမက ၂၀၁၀ ခုနှဈတုနျးက စီရျောနယျလျဒိုဟာ မီလနျမွို့မှာရှိတဲ့ ဟိုတယျတဈခုမှာ ယူရို(၄၀၀၀)ပေးပွီး ပြျောပါးခဲ့တယျလို့ အီတလီရှနေ့တှေကေို တိုငျကွားခဲ့တယျ။
အဲဒီအခြိနျက ကာရီမယျမာရာရဲ့ အသကျဟာ (၁၇)နှဈသာရှိသေးပွီး အီတလီနိုငျငံက ဥပဒအေရ ဒါဟာ ပွဈမှုမွောကျပါတယျ။ အီတလီနိုငျငံမှာ နှဈဦးသဘောတူဆိုရငျ အသကျ(၁၄)နှဈအရှယျမှာ လိငျဆကျဆံခှငျ့ရှိပမေယျ့ အသကျ(၁၇)နှဈအောကျ မိနျးကလေးတှကေို အခကွေးငှပေေး ပြျောပါးရငျ မုဒိမျးမှုအဖွဈ သတျမှတျထားလို့ပါ။ ကာရီမယျမာရာဟာ အဲဒီအခြိနျကတညျးက စှပျစှဲမှုတှေ လုပျခဲ့ပမေယျ့ စီရျောနယျလျဒိုဘကျက အကွောငျးပွခကျြ အခိုငျအလုံနဲ့ ငွငျးဆနျခဲ့လို့ စှဲခကျြတငျ မခံခဲ့ရဘူး။ စီရျောနယျလျဒိုက ကာရီမယျမာရာ စှပျစှဲခဲ့တဲ့အခြိနျတုနျးက သူဟာ မီလနျမှာ မရှိသလို အဲဒီမိနျးကလေးကိုလညျး တဈခါမှ မတှဖေူ့းဘူးလို့ ငွငျးဆနျခဲ့လို့ သကျသာခဲ့တာပါ ။ ကာရီမယျမာရာဟာ အရငျကလညျး အီတလီဝနျကွီးခြုပျဟောငျး ဘာလူစကိုနီ Berlusconi ကို သူမ အသကျမပွညျ့သေးတဲ့အခြိနျမှာ ငှပေေးပွီး ပြျောပါးခဲ့တယျလို့ စှပျစှဲခဲ့ဖူးသူဖွဈပါတယျ။
စီရျောနယျလျဒိုဟာ အရငျကတညျး မိနျးကလေးလေးတှေ ထညျလဲတှဲခဲ့သူဖွဈပွီး Celebrity တခြို့နဲ့တောငျ ပတျသကျခဲ့ဖူးပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ မိသားစုနဲ့ တညျတညျငွိမျငွိမျ ဖွတျသနျးနပေမေယျ့ အတိတျက သူလုပျခဲ့တဲ့ အမှားတှရေဲ့ အကြိုးဆကျကို ခံစားနရေပွီလို့ပဲ ဆိုရတော့မှာပါ။